रातो अंगुर खानुका फाइदा के-के छन् ? जानिराखौँ - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com रातो अंगुर खानुका फाइदा के-के छन् ? जानिराखौँ - खबर प्रवाह
रातो अंगुर खानुका फाइदा के-के छन् ? जानिराखौँ
गर्मीको मौसममा रातो अंगुरले धेरैलाई आकर्षित गर्दछ । रातो अंगुर हेर्दा जति आकर्षक देखिन्छ, खाँदा उत्ति नै स्वादिलो पनि हुन्छ । यसको अमिलो तथा गुलियो स्वादकै कारण गर्मीमा सेवन गरिने विभिन्न जुसमा समेत यसको प्रयोग गरिन्छ । डाइटिसियनहरूका अनुसार रातो अंगुरमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिनका साथै एन्टी अक्सिडेन्ट तत्व पाइन्छ । यसको सेवनले शरीरमा आवश्यक मात्रामा पोषणतत्व प्रदान हुनुका साथै विभिन्न रोग लाग्नबाट समेत जोगाउँछ । रातो अंगुर सेवन गर्नुका अन्य थुप्रै फाइदा छन्, जुन यसप्रकार छ :
आँखाको ज्योति बढाउँछ: रातो अंगुरमा प्रशस्त मात्रामा एन्टीअक्सिडेन्ट तत्वका साथै रेस्वेराट्राल तत्व पाइन्छ । यसमा रहेको तत्वले आँखाको टिस्यूलाई अवरोध गर्ने केही एञ्जाइमको विपरीत काम गरेर त्यसलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ ।
भिटामिन ‘के’ ले भरिपूर्ण: रातो अंगुर धेरैको रोजाइमा पर्छ । रातो अंगुर हेर्दा जति आर्कषक देखिन्छ, स्वादमा पनि यो उत्तिकै मिठो तथा गुलियो हुन्छ । रातो अंगुरमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन ‘के’ पाइन्छ । यसको सेवनले हड्डीमा क्याल्सियमको मात्रा समेत बढ्ने गर्छ ।
उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ: कसैलाई उच्च रक्तचापको समस्या भएमा रातो अंगुरको सेवन स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । यसमा पाइने पोटासियमले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्छ । किनकि शरीरमा पोटासियमको मात्रा न्यून भएमा उच्च रक्तचापको समस्या निम्तने गर्छ ।
क्यान्सर हुन दिँदैन: रातो अंगुरमा पाइने रेस्वेराट्रोल तत्वकै कारण शरीरलाई क्यान्सर रोग लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ । यसबाहेक सूर्यको हानिकारक विकिरण छालामा हुने असरबाट समेत छालालाई बचाउन सकिन्छ ।
एलर्जी भगाउँछ: रातो अंगुरले शरीरमा हुने विभिन्न एलर्जीबाट टाढा राख्छ । यसमा पाइने क्वरसेनटिन तत्वले छाला सुन्निन तथा पोल्नबाट बचाउँछ ।
डण्डीफोरबाट बचाउँछ: छाला सम्बन्धी समस्यामा रातो अंगुर निकै फाइदाजनक मानिन्छ । यसले छालालाई हानि हुनबाट जोगाउँछ । यसमा रहेको रेस्वेराट्रोल तत्वका कारण छालामा डण्डीफोर हुने सम्भावना समेत न्यून हुने गर्छ ।
मिर्गाैलाको लागि फाइदाजनक: अंगुरको सेवनले पाचन तन्त्र स्वस्थ रहनुका साथै मिर्गौलामा विकार हुनबाट जोगाउँछ । त्यसैले पनि अंगुर फल्ने मौसममा यस्ता अंगुर कम्तीमा एक पटक भए पनि सेवन गर्नैपर्छ ।
प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ: रातो अंगुरको सेवन गरी शरीरमा प्राकृतिक तरिकाबाटै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सकिन्छ ।
तौल घटाउँछ: रातो अंगुरमा बाहिरी बोक्रामा स्यापोनिन नामक तत्व पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ । यसले कोलेस्ट्रोललाई जम्मा गरी रगतमा अवशोषित हुनबाट रोक्छ । यसको सेवनले मोटोपना तथा मुटुसम्बन्धी रोग लाग्नबाट समेत बचाउँछ ।
४८ लागिन् करिश्मा : बर्थडेमा पुगिन् सिमरा, टाइमलाइनमै फ्यानको शुभकामना
राप्रपा बिभाजनकाे संघारमा, विशालनगरमा कमल थापा समूहको छलफल